जागिर खोज | USAHello देखि रोजगार र क्यारियर स्रोतहरू | USAHello
काम खोजी सुरु
तपाईं आफ्नो काम खोजी सुरु गर्नु अघि, तपाईं आफ्नो पछिल्लो काम अनुभव र शिक्षाको बारेमा जानकारी भेला गर्न आवश्यक. घटनाहरू उपस्थित र आफ्नो व्यावसायिक नेटवर्क ठूला मनका गर्न स्वयं मा योजना। थप पढ्नुहोस्
सबैभन्दा काम अवसर अनलाइन फेला तर तपाईं पनि थाहा मान्छे मार्फत खोज गर्न सक्नुहुन्छ, रोजगार कार्यालय मा, र व्यापार को ठाउँमा। थप पढ्नुहोस्
एक रिजुम कागज आफ्नो कौशल र उपलब्धिहरु सूची र एक कर्मचारी ध्यान प्राप्त गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका छ. आफ्नो रिजुम कसरी लेख्न सुझावहरूको फेला, के जानकारी समावेश गर्न, र एक कि टेम्पलेट एक रिजुम जस्तो हुनुपर्छ के देखाउँछ। थप पढ्नुहोस्
कभर पत्र तपाईं थप विवरण आफ्नो कौशल र अनुभवको बारेमा कथाहरू बताउन सक्नुहुन्छ जहाँ एक पृष्ठ लामो दस्तावेज हो. आवरण पत्र तपाईं अन्य आवेदन भन्दा फरक छन् कसरी व्याख्या गर्न र तपाईं को लागि लागू गर्दै कम्पनी मा काम गर्न चाहनुहुन्छ किन व्याख्या गर्न मौका दिनुहोस्। थप पढ्नुहोस्
व्यावसायिक उल्लेख तपाईं काम वा स्वेच्छा छन् मानिसहरूलाई छन्. हाकिमहरूले यी मानिसहरू जस्तै हुन् के सिक्न कल गर्नेछ. तपाईं एक काम खोजी सुरु गर्नु अघि, तपाईं सँगै सन्दर्भहरू को सूची र तिनीहरूको सम्पर्क जानकारी राख्नुपर्छ थप पढ्नुहोस्
जागिर पोर्टल मार्फत लागू
काम पोर्टल तपाईं आफैलाई बारेमा जानकारी पेश गरेर स्थितिहरू लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ अनलाइन वेब पृष्ठहरू छन्, आफ्नो रिजुम, र कहिलेकाहीं कभर पत्र. एक पटक तपाईं आफ्नो जानकारी पेश गरेका छन्, तपाईं यसलाई सम्पादन गर्न सक्नुहुन्न, त्यसैले यो तपाईं तयार र ध्यानपूर्वक सम्पादन महत्त्वपूर्ण छ थप पढ्नुहोस्
लागि जब कागज आवेदन भर्न
व्यापार केही स्थानहरू, सबैभन्दा रेस्टुरेन्ट जस्तै, अझै पनि प्रविष्टि स्तर जब लागि कागज आवेदन प्रयोग. हाम्रो कागज आवेदन कसरी भर्न सिक्न गल्ती नगरी थप पढ्नुहोस्
जब हाकिमहरूले तिनीहरूले तपाईं किराया गर्न सक्नुहुन्छ लाग्छ, उनीहरूले फोन तपाईं आमन्त्रण, भर्चुअल, वा व्यक्तिलाई इंटरव्यू. लगाउने के सिक्न, कसरी कार्य गर्न, र एक साक्षात्कार पछि के गर्न थप पढ्नुहोस्
तिनीहरूले काम प्रस्ताव प्राप्त गर्दा सबैभन्दा अमेरिका आफ्नो तलब बातचीत. भन्न पाठ सिक्न के गर्न र भुक्तानी छन् कति वृद्धि गर्न यो जब भन्न थप पढ्नुहोस्
नेटवर्किङ घटनाहरू लागि जब देख रहे जो मानिसहरू र मान्छे क्यारियर सल्लाह साझेदारी सामाजिक घटनाहरू छन्. तपाईं भन्न के अभ्यास यदि तपाईं कम परेशान हुनेछ, तपाईं संग ल्याउन के, र तपाईं जान अघि मान्छे कुरा गर्न कसरी। थप पढ्नुहोस्
काम साक्षात्कार प्रश्नहरूको राम्रो जवाफ सिक्ने र अभ्यास तपाईं आफ्नो साक्षात्कार मा राम्रो गर्न मद्दत गर्नेछ. सबैभन्दा सामान्यतः सोधे प्रश्न पढ्न. थप पढ्नुहोस्
स्वयं र इंटर्नशिप जब
स्वयं र इंटर्नशिप जब कि तपाईं कार्यस्थल अनुभव प्राप्त गर्छ बेतलबी काम हो. तिनीहरूले तपाईं एक काम प्राप्त गर्न सक्छन् कसरी सिक्न. थप पढ्नुहोस्
राम्रो आफ्नो काम खोज व्यवस्थापन गर्न चार उपयोगी उपकरण के वेबसाइट मा हेर्न थाह तपाईं नेटवर्क मदत र काम पाउन सक्नुहुन्छ. आफ्नो काम खोज व्यवस्थापन गर्न सिक्न चार उपयोगी अनलाइन उपकरण
6 कदम अमेरिका मा एक शरणार्थी वा आप्रवासी रूपमा आफ्नो सही काम पाउनछ व्यावहारिक सुझावहरू सबै newcomers लागि आफ्नो सिद्ध काम पाउन. बनाउन आफ्नो क्यारियर खोज को बाहिर सबै भन्दा: तपाईं अमेरिका मा आफ्नो सही काम कसरी पाउँछौं? USAHello
मा जब र शिक्षा शरणार्थी resettlement मामला प्रबन्धक देखि सल्लाह